Miara-miasa Amin’ny Mpanolotena Mpaka Sary Ny Global Voices · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 18 Aogositra 2016 5:37 GMT
Vondrom-piarahamonina mpikambana ao amin'ny Mpaka Sary Mpilatsaka An-tsitrapo na Video Volunteers, mijery izao tontolo izao amin'ny alàlan'ny fakantsary . Sary avy amin'ny Mpaka Sary Mpilatsaka An-tsitrapo ao amin'ny Flickr. CC BY-SA 2.0
Ny Video Volunteers na ireo Mpaka Sary Mpilatsaka An-tsitrapo izay fikambanam-piaraha-monina mpampita vaovao no lisitra fanampiny vaovao indrindra ao amin'ny lisitra lavan'ny mpiara-miasa mitovy hevitra amin'ny Global Voices . Mifantoka amin'ny zava-misy ao India izy ary manome hery ireo olom-pirenena mahantra indrindra eran-tany amin'ny alàlan'ny fanaovan-gazety an-dahatsary sy manampahaizana amin'ny fanangonana lahatahiry mba ahafahan'izy ireo hiteny amin'ny alàlan'ny fampitam-baovao sy hitaky ny zony.
Miasa amin'ny alàlan'ny tambajotra iray ny fikambanana izay ahitana solontena mpifandray ao amin'ny fokonolona maherin'ny 200, ary ao anatin'ny vondrom-piarahamonina niangarana daholo ry zareo. Maka lahatsary amin'ny alàlan'ny finday ireo solontena mba handraketana ny fanavakavahana ,ny tsindrihazolena ,ny baranahiny, ny kolikoly ary ny kolontsaina.
Zaraina amin'ny alàlan'ny tetikasan'ny Video Volunteers antsoina hoe IndiaUnheard (IndiaTsyRe) ireo lahatsary, izany dia sehatra vaovao iray hafa mamoaka vaovao anisan'ny tsy raharahian'ireo fampitam-baovao mahazatra. Alefa amin'ny alàlan'ny efijery lehibe ihany koa ny lahatsary ho hitan'ny olona an'arivony ao an-tanànan'i India mba hanosika azy ireo handray andraikitra. Mandrisika ireo manam-pahefana sy ireo olom-pirenena mba handray andraikitra amin'ny olana voasongadina ny ampahaefatry ny lahatsary .
Nanangana ny Video Volunteers i Jessica Mayberry, Sakaizan'ny TED, tamin'ny 2003 rehefa avy nandany herintaona tamin'ny fanofanana ireo vehivavy Indiana eny ambanivohitra amin'ny fanatontosana sarimihetsika, tamin'ny maha Sakaizan'i WJ Clinton azy ao amin'ny Orina Mpanasoa Amerikana India. Niara-niasa akaiky tamin'ny tale Stalin K, Indiana mpamokatra horonantsary fanadihadiana sady mpikatroka ao amin'ny radio i Mayberry, .
Ny sasany amin'ireo olom-pirenena tia manao gazety ao amin'ny VideoVolunteers. Sary: Stalin K.
Efa maherin'ny 500 ny lahatsary vokatra ahitana lohahevitra tahaka ny fampanambadiana ankizy, ny fivarotan-tena an-tempoly, ny fifandiram-pikomiana, ny habibiana atao amin'ny Dalits ary ny fandriampahalemana eo amin'ny Haindò sy ny Miozolomana, ary efa nampijerena olona mihoatra ny 300.000 teny ambany tanàna sy ireo tanàna kely tamin'ny alalan'ny efijery lehibe ankalamanjana.
Miasa amin'ny tetikasa hafa maro koa ny Video Volunteers toy ny Videoshala, izay manofana ny mpikambana ao amin'ny fiaraha-monina amin'ny fomba famokarana lahatsary fanabeazana, sy ny Videoactive Girls, izay mampianatra ny adolantsento vavy ny fampiasana ny herin'ny fampitam-baovao an-tsary mba hilazan'izy ireo ny tantarany. Manana fiaraha-miasa amin'ny fahitalavi-pirenena Indiana Doordarshan ihany koa izy mba ahafahany mandefa lahatsarin'olom-pirenena voafantina ho an'ny mpijery midadasika kokoa.
Efa nitatitra [mg] tamin'ny lahatsarin'ny Video Volunteers tsindraindray ihany ny Global Voices taloha. Amin'ity fiaraha-miasa ity izahay hampiseho isa-potoana raikitra lahatsary, lahatsoratra sy votoaty hafa vokarin'ny Video Volunteers, sy ny fiarahamonin'ny olom-pirenena tia manao gazety ao aminy, ho an'ny mpamakinay any amin'ireo firenena mihoatra ny 160 sy amin'ny fiteny maro amin'ny alàlan'ny Lingua tranonkalanay mpandika lahatsoratra.
Azo jerena ao amin'ny Facebook, Twitter sy YouTube ihany koa ny Video Volunteers .